» मनोज गजुरेललाइ पुर्व पत्नि मिनाको कडा प्रश्न!- “के नपुगेर घरमा आइमाई ल्याउन लागेको?सेक्स नपुगेर होकि?” हेर्नुहोस पूरा भिडियो… मनोज गजुरेललाइ पुर्व पत्नि मिनाको कडा प्रश्न!- “के नपुगेर घरमा आइमाई ल्याउन लागेको?सेक्स नपुगेर होकि?” हेर्नुहोस पूरा भिडियो… – हाम्रो खबर
मनोज गजुरेललाइ पुर्व पत्नि मिनाको कडा प्रश्न!- “के नपुगेर घरमा आइमाई ल्याउन लागेको?सेक्स नपुगेर होकि?” हेर्नुहोस पूरा भिडियो…
2020, December 11th, Friday
admin 13382 Views
काठमाडौ । हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको पनि बिहे हुने भएपछि उनकी पूर्व पत्निले मनोज गजुरेललाई दनक दिएकी छिन् ।
उनको पहिलेको बिहे सफल नभएपछि मनोज र उनकी श्रीमति अलग बस्दै आएका थिए । मनोजले बिहे गर्ने थाहा पाएपछि मिना ढकालले फेसबुकमा आफ्ना भावना ब्यक्त गरेकी छिन् । मिनाले पछिल्लो फेसबुक स्टाटसमा लेखिन्, ‘छि छि अन्तिम निर्णय हो भने,अती नै गलत र गैरजिम्मेवार पुर्ण निर्णय हुनेछ।
कलिला भर्खर हुर्किदै गरेका साना छोराछोरी माथी अन्याय हुन्छ फेरि त्यही चार भित्ता भित्र । सधै गलत निर्णय लिदै गर्दा समाज, छिमेकमा शिर ठाडो पारि बाच्न गार्हो हुन्न र ? खोक्रो आडम्बर।’
मीनाले मनोजले बिहे गर्ने भनेर एक अन्तवार्तामा बोलेसँगै साजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो भनाई राखेकी छन् । मैले छोडेको श्रीमान उसका तीन जना दाजुभाई सँगै छन् । आमा घरमा छोरा छोरी छन् । तर उनलाई घरमा सँगै सुत्ने स्वास्नी नभै भएन ? मत ३ वर्ष देखि एक्ले बसी राछु त । म सँग न मेरो छोराछोरी छन् न म मेरो बाउ आमा सँग छु।
तर उ त त्यत्रो परीवार सँग हुदापनि कति कमजोर त्यो पुरुष ल भन्नुस त भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । उस्लाई के पुगेन से,’क्स नपुगेको होकी भात खान दिने मान्छे छ वाशिङ मेसिन राखिदिएको छु । तातो पानी चिसो पानी सबै फिट गरिदिएको छु मैले त्यो मान्छे लाई के नपुगेर घरमै आईमाइ ल्याउन लागेको ? मीनाले पटक पटक यो संबाद दाहोर्याएकी छन्।
गजुरेलले आफूले बिहे गर्न लागेको सत्य भएको बताए । उनले केटीको बारेमा थप खुलाउन भने चाहेनन् । अहिले तयारी भै रहेकाले सबै भन्न नमिल्ले भन्दै गजुरेलले समय आएपछि आफै पर्दा खुल्दै जाने बताए । उनले निकट भविश्यमै केटीको बारेमा कुरा सार्वजनिक गर्ने बताए।
२०५३ सालमा प्रेम विवाह गरेका मनोज गजुरेल र मिना ढकाल कानूनी रुपमा अलग भएपछि एक अर्का प्रति आरोप लगाउने गरेका थिए।मनोजलाई पछिल्लो समय कोरोना भएपछि भने मिनाले निकै भावुक स्टाटस लेखेकी थिइन् । मनोज र मीनाको एक छोरा र एक छोरी रहेका छन् भने दुबै गजुरेलसँगै बस्दै आएका छन्।
“खड्क ओलीले, भन्दा दश गुणा, उत्कृष्ट काम गरेर देखाऊँछु शहरि, विकास मन्त्रि : रामकुमारी झाँक्री
“प्रधानन्यायाधीशको कोटाका मान्छेलाई मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्रीले त,मा,सा देखाए: रामचन्द्र पौडेल”
“फेरि अर्थमन्त्री, जनार्दन, शर्माको अर्को ए,क्सन– बन्द रहेका उद्योगहरू, सञ्चालन गरिने !”
“मन्त्री प्रेम, आलेले नेपाल, एअरलाइन्सका कर्मचारीको, आन्दोलन स्थगित गराए”
“संसदमा एमालेको नारा- ‘गो,ली हान्न, पाइँदैन, जनता मा,र्न पाइँदैन’”
“देउवा भन्दा केपी,ओली नै राम्रोः रामचन्द्र पौडेल”
( 2021, October 13th, Wednesday)